Afar wiil reer Awdal ah oo Siilaanyo Jabuuti u dhiibay oo labo ka mid ah Koronto Nafta lagaga qaaday?? | Awdal State News Network
Home » ANALYSIS & EVENTS » Afar wiil reer Awdal ah oo Siilaanyo Jabuuti u dhiibay oo labo ka mid ah Koronto Nafta lagaga qaaday??
Afar wiil reer Awdal ah oo Siilaanyo Jabuuti u dhiibay oo labo ka mid ah Koronto Nafta lagaga qaaday??
Carta-Boramacity.com-Labadii Ruux ee Jabuuti isku qarxiyay hayb ahaan waxay u kala dhasheen Hargeysa iyo gobolka Shiniile ee Itoobiya, waxay sida la sheegay muddo ku sugnaayeen Hargeysa halkaas oo laga laga ambo-baxiyay.
Si loo raad-gado waxa labadii qof baabuurkii ay ku safrayeen looga soo kireeyay wiil ree Boorama ah sida la sheegayo. Marka aan si daacad ah u hadallo Qof baabuur wata oo dad soomali ah oo dalka gudihiisa joogi ay gaadhigiisii ka kreysteen ma ogaan karo dadka kireystay waxa ay yihiin. Laakiin xaajadu waxy u egtahay Cudurkii ku dhacay Fardaha in Dameeraha laga gubayo dadka reer Awdala godob aad u weyn laga galayo torture
Afar wiil oo reer Awdal ah oo Siilaanyo Jabuuti u dhiibay oo labo ka mid ah Koronto Nafta lagaga qaaday iyo Wasiirkiisa A/Gudaha oo sheegay in cidii muwaadin ah Dalka lagu maxkamadaynayo cidii kalana la dhiibayo, taas oo macnaheedu noqonaysa in cid uuni muwaadiniin yihiin.
Dhalinyarada reer Awdal waxa lagu kala kacay fal aad u foolxun oo in laga dhiidhiyo u baahan. DHagartaa iyo godobtaasina waxay dhakada u saarantahay Siilaanyo iyo Xigtadiisa.
Ma jirto cid illaa imika arinkan ka hadashay dal iyo dibad marka laga reebo Sheekh Xasan Deheeye oo ka dhiidhiyay, Salaadiintii TV-yada horjoogi jiray iyo Siyaasiyiintii reer Awdal iyo Salal ugu jiray golayaasha Somaliland oo gabi ahaanba la la’yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen